Kutanga kwechivi (1-13)
Nhema dzekutanga (4, 5)
Jehovha anopa mutongo kuvapanduki (14-24)
Uprofita pamusoro pemwana wemukadzi (15)
Kudzingwa kwevanhu muEdheni (23, 24)
3 Nyoka+ ndiyo yakanga yakachenjera* kupfuura mhuka dzese dzemusango dzakanga dzaitwa naJehovha Mwari. Saka yakati kumukadzi: “Ichokwadi here kuti Mwari akati hamufaniri kudya michero yemiti yese yemumunda?”+ 2 Mukadzi akabva ati kunyoka: “Tingadya hedu michero yemiti yemumunda.+ 3 Asi Mwari akataura nezvemuchero wemuti uri pakati pemunda,+ achiti: ‘Musaudya, kana kuubata; mukangodaro muchafa.’” 4 Nyoka yakabva yati kumukadzi: “Chokwadi hamumbofi.+ 5 Nekuti Mwari anoziva kuti zuva ramuchaudya, maziso enyu achasvinudzwa uye muchafanana naMwari, muchiziva zvakanaka nezvakaipa.”+ 6 Audzwa izvi, mukadzi akaona kuti muti wacho wakanga wakanakira kudya uye kuti wakanga uchiyevedza,* chokwadi, muti wacho waifadza kutarisa. Saka akatemha muchero wawo akatanga kuudya.+ Akazopawo murume wake paakanga ava naye, akatanga kuudya.+ 7 Maziso avo akabva asvinudzwa, vakabva vaziva kuti vakanga vasina kupfeka. Saka vakasonanidza mashizha emuonde, vakazvigadzirira zvinofukidza chiuno.+ 8 Gare gare vakanzwa inzwi raJehovha Mwari paakanga achifamba mumunda pakwainge kwava kutonhorera, uye murume nemudzimai wake vakanohwanda Jehovha Mwari pakati pemiti yemumunda. 9 Jehovha Mwari akaramba achishevedza munhu achiti kwaari: “Uri kupiko?” 10 Akazodaira achiti: “Ndanzwa inzwi renyu mumunda, asi ndatya nekuti ndanga ndisina kupfeka, saka ndahwanda.” 11 Iye akati: “Ndiani akuudza kuti wanga usina kupfeka?+ Asi wadya muchero wemuti wandakati usadye?”+ 12 Murume akati: “Mukadzi wamakandipa ndiye andipa muchero wemuti wacho, saka ndadya.” 13 Jehovha Mwari akabva ati kumukadzi: “Chii ichi chawaita?” Mukadzi wacho akapindura kuti: “Nyoka ndiyo yandinyengera, saka ndadya.”+ 14 Jehovha Mwari akabva ati kunyoka:+ “Nemhaka yezvawaita izvi, watukwa pazvipfuwo zvese nepamhuka dzese dzesango. Uchafamba nedumbu, uye uchadya guruva mazuva ese eupenyu hwako. 15 Ndichaisa ruvengo+ pakati pako+ nemukadzi,+ nepakati pevana*+ vako nemwana*+ wake. Iye achakupwanya musoro+ uye iwe uchamuruma pachitsitsinho.”+ 16 Kumukadzi akati: “Ndichawedzera kwazvo kurwadziwa kwako nepamuviri; uchasununguka vana uchirwadziwa, uchada kugara uchingova pedyo nemurume wako, uye achakutonga.” 17 Kuna Adhamu* akati: “Sezvo wateerera inzwi remudzimai wako, ukadya muchero wemuti wandakakurayira+ ndichiti, ‘Usaudya,’ ivhu ratukwa nemhosva yako.+ Uchadya zvibereko zvaro uchirwadziwa mazuva ese eupenyu hwako.+ 18 Richakumerera minzwa nemasora anobaya, uye uchadya zvinomera zvemusango. 19 Uchadya zvekudya zveziya rechiso chako kusvikira wadzokera kuvhu, nekuti wakatorwa kwariri.+ Zvauri guruva uchadzokera kuguruva.”+ 20 Pashure peizvi, Adhamu akatumidza mudzimai wake kuti Evha,* nekuti ndiye aizova amai vemunhu wese mupenyu.+ 21 Jehovha Mwari akagadzirira Adhamu nemudzimai wake nguo refu dzematehwe, kuti vapfeke.+ 22 Jehovha Mwari akabva ati: “Iye zvino munhu ava semumwe wedu pakuziva zvakanaka nezvakaipa.+ Saka kuti arege kutambanudza ruoko rwake, otorawo michero yemuti weupenyu,+ odya, orarama nekusingagumi,—” 23 Jehovha Mwari akabva amudzinga mumunda weEdheni+ kuti arime ivhu raakanga atorwa kwariri.+ 24 Saka akadzingira munhu kunze, akaisa makerubhi+ kumabvazuva kwemunda weEdheni nebakatwa raibvira moto raigara richitenderera richichengetedza nzira yaienda kumuti weupenyu.
^ Kana kuti “ndiyo yainyengera.”
^ Kana kuti “uchifadza maziso.”
^ Kureva kuti “Munhu Wepanyika; Vanhu.”
^ Kureva kuti “Mupenyu.”